Ry sakaiza, ampisambory mofo telo aho
"(Hoy Jesosy:) Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava, dia hahita ianareo; dondòny, dia hovohana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo; ary izay mitady no mahita; ary izay mandondòna no hovohana." Lioka 11:9,10
Fanoharana vitsivitsy; Lioka 11:1-13
Famintinana: Efa alim-be tamin’izay; ary nisy lehilahy iray nampiantrano ity namany sendra nandalo. Tsy nanana na inona na inona haroso azy izy, ka na efa misasakalina aza, dia nankany amin’ny namany iray hafa, hiangavy aminy hampisambotra azy mofo telo. Efa nihidy ny tranon’io namany io, ary efa natory ny ankohonany, nefa nitsangana ihany izy, rehefa voakotaban’ilay sakaizany, “hanome azy izay ilainy”.
Heviny: Io fangatahana sahisahy tamin’ny andro alina io, raha efa natory avokoa ny olona rehetra, dia mampiseho ny atao hoe tena vavaka, vavaka mifanandrify amin’izay tena ilaina. Fangatahana atao am-pahatokiana amin’Ilay Andriamanitra fantatra amin’ny maha Mpanome Azy. Koa afaka miteny amintsika ny Tompo hoe: “Mangataha, dia homena ianareo”.
Fampiharana: Ahoana ny fomba ivavahantsika amin’ny Tompo? Manaraka fanao mahazatra? mampiasa fehezanteny efa voarafitra mialoha? Tsia, fa aoka hahitsy, hilaza mazava tsara ny zava-misy. Aoka koa hangataka ho an’ny hafa, tahaka ity lehilahy ity, izay nila mofo ho an’ny namany.
Vonona ve isika hanome ho an’ny olona manatona antsika, izay zavatra ilainy, na zavatra hita maso na zava-panahy? Mitandrema tsy hanosi-bohon-tanana azy ireny; aoka kosa hihaino azy am-pitiavana.
Raha sahiran-tsaina isika, dia aoka hivavaka amin’Andriamanitra miaraka amin’izy ireny. Aoka hangataka ireo “mofo telo” ireo, milaza tsotra amin’Andriamanitra izay zavatra tsy ampy, ary tsy hatahotra ny hanelingelina Azy. Am-pitiavana no amalian’Andriamanitra ny zanany, ary tsy manome izay tsy tandrify Izy, na oviana na oviana. Fa manome “zava-tsoa”.